Archive de l'auteur | NewsMada | Page 897
Nizara sakafo ny Telma : afaka nifety ny fianakaviana 1 600
Par Taratra sur 27/06/2016 Divers, NS Malagasy
Afaka nifety ny fianakaviana sahirana 1 600 ahitana ankizy maro avy amin’ny fokontany Antanandrano noho ny fanampian’ny orinasa Telma tao anatin’ny fanamarihana ny asaramanitra, ny zoma lasa teo. Niaraka nikarakara ny hetsika ny orinasa Telma sy ny Fikambanan’ny tantsaha mpamboly Antanandrano (FTMA). Fianakaviana marefo ara-pivelomana ny ankamaroan’izy ireo satria miaina amin’ny vola 2 000 Ar isan’andro. Nizara […]
Fetin’ny 26 jona : nandeha ny varotra arendrina vita malagasy
Par Taratra sur 27/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsikaritra, nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin’ity taona ity, fa lasa nihabetsaka ireo ankizy nitondra ny arendrina vita malagasy. Nisy rahateo ny fanentanana tamin’ny haino aman-jery sy nataon’ireo fiarahamonim-pirenena sasany amin’ny tokony hanjifana azy ireny ka voarain’ny ankamaroan’ny Malagasy izany. Nisy ihany ireo nitondra ny arendrina vita sinoa toy ireny jiro mitselatselatra ireny, saingy nihanitombo […]
Moramanga : fotodrafitrasa maro avy amin’Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Notokanana tamin’ity volana jona ity ireo fotodrafitrasa maromaro ao Moramanga avy amin’ny orinasa Ambatovy. Anisan’ny nahitana izany fotodrafitrasa izany ireo fokontany efatra ka anisan’izany ny ao Ambohibary, Morarano Gara, Ambatovola ary Andasibe. Nanohana ny fananganana fotodrafitrasa maro Ambatovy ny taona 2015, toy ny fanorenana sekoly ao Ambohitranivo, biraom-pokontany vaovao ao Sakalava sy Ampitambe, tetezana, lalana […]
Mahamasina : niavaka ny matson’ny Akademia miaramila
Nampiavaka ny matso, tetsy Mahamasina omaly, ny fihetsika mirindra am-panginana sy milamina nataon’ny Akademia miaramilan’Antsirabe (AM). Nanao izany ny andiany faha-38 sy 39. Nisongadina ny fahaiza-manao amin’ny fihazonana basy, mampiakatra sy mampidina izany, arahin’ny famindra milamina, tsy misy mozika. Nasehon’izy ireo an-tsoratra amin’ny alalan’ny fihetsika mirindra koa ny faha-50 taon’ny AM. Sambany ny nanaovan’izy ireo […]
Fivorian’ny Frankofonia : ho avy ny filoha Ouattara
« Mandalo eto ny delegasiona ivorianina tarihin’ny ambasadaoro Koffi Djadan Amos. Hijery ny fanomanana ny handraisantsika ny fivorian’ny Frankofonia izy ireo… Hanana degelasiona 50 hanatrika ny fivorian’ny Frankofonia i Cote d’Ivoire ka anisany ny filoha Alassane Ouattara », hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, ny zoma teo tetsy Anosy, nitatitra ny fihaonany amin’ity ambasadaoro ity. Notsiahivin’ny […]
Filoha Rajaonarimampianina : “Takina amintsika vahoaka ny fitoniana sy filaminana”
Par Taratra sur 27/06/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Vita ny fetim-pirenena… Ahoana ny tohin’ny raharaha? Mitaky fitoniana sy filaminana amin’ny vahoaka ny filohan’ny Repoblika. “Izay takina amintsika, ny fitoniana sy filaminana. Tsy mora ary tsy manafoana ny adihevitra politika ny filaminana. Mifanohitra amin’ny fambolena korontana sy fitanisana fanonganam-panjakana isan’andro izany, na ny fanaovana sorona ny vahoaka efa sahirana, ny fanelezana tsaho hampihorohoroana vahoaka. […]
Iavoloha : 50 000 Ar ny sakafon’olona iray
Manodidina ny 1 600 ireo nasaina tamin’ny fiaraha-misakafo teny Iavoloha, omaly, noho ny fetim-pirenena. Nahena izany, tsy toy ny tamin’ny teo aloha rehetra. Na izany aza, mitentina 50 000 Ar ny sakafon’ny olona iray. Midika izany fa eo amin’ny 80 tapitrisa Ar eo ho eo ny vidin’ny sakafon’ireo olona voaasa. Tsy resahina ireo fandaniana samihafa sy ny […]
Miparitaka ny grenady! Olona dimy indray voasambotry ny mpitandro filaminana teny Mahamasina sy ny manodidina, omaly nandritra ny matso teny amin’ny kianjan’i Mahamasina. Roa nahatrarana grenady lakrimozena raha nanimpy cocktail molotov kosa ny telo… Saika hanakorontana ? Olona dimy voasambotry ny mpitandro filaminana, omaly teny Anosy sy Mahamasina,voarohirohy ho nikasa hanakorontana nandritra ny matso lehibe […]
Frantsa : ahina ny fisian’ny Daesh eto
Efa mivonona amin’ny fotoana rehetra. Miatrana ary mikasa ny hiditra an-tsehatra amin’ireo firenena aty amin’ny ranomasimbe Indianina, indrindra fa aty Madagasikara, ny komando frantsay, eo anivon’ny GIGN, araka ny fampitam-baovao avy atsy La Reunion. Efa miparitaka amin’ny faritra maro ny fampitandreman’ireo avy amin’ny fanjakana islamika (Daesh) ka nahatonga azy ireo ho mailo. Efa karazan’ny famantarana […]
Matso teny Mahamasina sy lanonana teny Iavoloha : tsy nipoitra i Deba sy Zafy, banga ny toeran-dRajoelina
Tsy tonga niatrika ny matso teny Mahamasina sy ny lanonana teny Iavoloha ireo filoha telo mirahalahy mianaka, omaly, ho fanamarihana ny fiverenan’ny Fahaleovantena. Tsy eto an-toerana fa mbola any ivelany ny mpanorina ny Mapar, Rajoelina. Nambaran’ireo olona akaiky azy fa hanao fety any amin’ny faritra niaviany avy ny mpiara-dia aminy. Nisongadina ohatra ny filaharana nataon’ny […]
Ankazobe : voafitaka ny mpikarakara seho
Tsy kely lalana ny ratsy ! Anisan’ny mandray anjara mavitrika amin’ny fanafanana ny fetin’ny Fahaleovantena ny mpanakanto. Voasoloky ny mpikarakara ny seho tany amin’ny distrikan’Ankazobe ary tsy afaka niatrika izany hetsika izany i Nina’s. Araka ny fanazavana nentin’i Jean Claude Vera, mpitantana ity tarika ity, « Tsy fantatra ny fomba nahazoan’ny mpikarakara ny findain’ny olona noresahany, nitonona […]
Vita famalifaliana, fa tsy afa-pahoriana…
Par Taratra sur 27/06/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita iny ny 26 jona. Lanonana sy fifaliana, araka izay tandrify ny tsirairay io, ny isan-tokantrano, isam-paritra… Vita iny, na teo aza ny indro kely tetsy sy teroa. Ahoana amin’izay ny fiatrehana ny fiainana, ny raharaham-pirenena? Tsy afaky ny fihetsiketsehana nandalo ny fahasahiranan-dava. Eo ny krizy politika amin’ny faharisarisan’ny fifampitokisan’ny vahoaka sy ny mpitondra: ny […]
Sahotaka tetsy Mahamasina sy HJRA : roa maty nipoahan’ny grenady, 72 mahery naratra
Par Taratra sur 27/06/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Hatramin’ny ora farany nanoratana, halina, roa no fantatra fa maty, maherin’ny 72 ireo naratra ka misy amin’ireo ny voa mafy. Izany no vokatry ny fipoahana grenady, teo avaratry ny podium, tetsy Mahamasina, halina tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany. Sahotaka tsy nisy ohatra izany, tetsy Mahamasina hatreny amin’ny Urgence HJRA. Raikitra ny fifanjevoana, omaly, […]
Fanamarihana ny Asaramanitra : nanampy ny zokiolona ny ViMa
Par Taratra sur 25/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Ho fanampiana ny olona marefo, ao anatin’ny fanamarihana ny faha-56 taona niverenan’ny Fahaleovantena, nisafidy ny hanohana ny boriborintany fahatelo ny Vision Madagascar (ViMa), omaly. Notolorana bodofotsy ny zokilona 686 ao amin’ny fokontany Ambohitrakely, Ankorondrano ary Antaninandro niaraka tamin’ny mpiandraikitra ny boriborintany fahatelo izay tompon-kevitra amin’ny hetsika. Ankoatra izay, nanao asa sosialy ihany koa ny ViMa […]
Euro 2016 : hanomboka anio ny ampahavalon-dalana
Par Taratra sur 25/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hitana ny sain’ny rehetra, manomboka amin’ity anio ity, ny lalao ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa (Euro 2016), taranja baolina kitra. Fihaonana telo no hisantatra izany ho an’ity asabotsy ity. Hifantoka any Frantsa avokoa ny mason’ny mpitia fanatanjahantena manomboka amin’ity asabotsy ity, eo amin’ny fiatrehana ny dingan’ny famaranana amin’ny fiadiana ny Euro 2016, […]
Lalao CJSOI : manohana ny MJS koa ny orinasa Star
Par Taratra sur 25/06/2016 Divers, NS Malagasy
Taorian’ny DHL Madagascar, nanome tanana ary manohana ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena malagasy (MJS) koa ny orinasa Star, amin’ny fiatrehana ny andiany fahafolo amin’ny lalao ho an’ny vaomieran’ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin’ny ranomasimbe Indianina (CJSOI). Fihaonana hatao eto Madagasikara ny 30 jolay ka hatramin’ny 5 aogositra, ho avy izao. Araka izany, nanolotra […]
Mizotra tsara ny fanomanana ny ny CEPE sy ny BEPC amin’izao fotoana izao, hoy ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Nitombo ny isan’ny mpiadina. Nitombo 1% ny isan’ny mpiadina BEPC ho an’ny taom-panadinana 2016, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fanabeazana fototra sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, Andriamampandry Todisoa. Mahatratra 323 963 ny mpiadina […]
« Ny litorjia sy ny toriteny fanao any amin’ny fonja », novelabelarin’ny mpitandrina, sady filoha nasionalin’ny aumônier-n’ny fonja, eo anivon’ny FJKM, Randriamahazaka Selasoa, « Ny tsara ho fantatra mikasika ireo sazy sy heloka », notarihin’ny mpisolovava, ny Me Ramanitra Liva, « Ny zo sy fitsipika tokony harahin’ny mpitondra fivavahana any anatin’ny fonja », nohazavain-dRtoa Leandrette, ary « Ny asan’Andriamanitra sy ny zon’olombelona », […]
Raparivo R.R : 60 taona nanaovana sary hosodoko
Par Taratra sur 25/06/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Raparivo R.R, andrarezin’ny sary hosodoko. 60 taona eo amin’io tontolon’ny zavakanto iray io. Tsy ho lalovam-potsiny izay vanim-potoana izay fa homarihina. Ho fanombohana ny hetsika rehetra, aranty ao amin’ny Tranombokim-pirenena, Anosy ny sanganasan-dRaparivo R.R, nanomboka omaly ka hatramin’ny 9 jolay izao. Raha ny fanazavan’i Tiana Raparivo, mahatratra 21 ny tabilao haranty amin’io fotoana io ka […]
Telma : masoivoho ho an’ny mpanjifa etsy Ankorondrano
Fanindroany ! Ankoatra ny etsy Analakely, Araben’ny Fahaleovantena, misokatra koa ny masoivoho manokana ho an’ny mpanjifa etsy amin’ny trano 2000 Ankorondrano. Natao handraisana ny mpanjifa tsotra sy ny mpandraharaha ity toerana ity, hanome torolalana, hanampy amin’ny ilaina, toy ny fisoratana amin’ny MVola, ny fanoloana karatra Sim, sns. Eo koa ny fanampiana aorian’ny fividianana (SAV) vokatra Telma, […]
Fivorian’ny Comesa sy Frankofonia : hanampy ny mpandraharaha rehetra ny ORTM
Mpandray anjara feno amin’ny fanatanterahana ny fihaonamben’ny frankofonia rehetra atao eto Madagasikara ny ORTM (Office de la Radio et de la Télévision publiques de Madagascar). Vita ny 23 jona teo tao amin’ny foibe misy ny fanomanana, Antaninarenina ny sonia fiaraha-miasa eo amin’ny ORTM sy ny komity mpanomana ny fivoriambe faha-XVI. Nanao sonia izany ny tale […]
« Kolosary Cinéma Malagasy » : tehirizina ireo « film » malagasy
Naseho, tany amin’ny mozea Dapper any Paris-Frantsa halina, ny hakanton’ny sarimihetsika malagasy. Nampahafantarina, nandritra io alina miavaka io, ny « Kolosary Cinéma Malagasy », angon-tantara an-tsary na « film » malagasy miisa 11. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Institut français sy ny faritra Ile-de-France ity tetikasa ity. Tanjona ny hiaro sy hitahiry ireo vakoka sarimihetsika malagasy sy […]
Hametra-pialana ny praiminisitra : niala tao amin’ny Vondrona eoropeanina i Grande Bretagne
Ratsy ho an’ny Vondrona eoropeanina ny fialan’i Grande Gretagne ao amin’ny Vondrona eoropeanina. Misy fiantraikany eo amin’ny lafiny politika sy toekarena izany. Hametra-pialana tsy ho ela ny Praiminisitra David Cameron. Efa nampoizina ! Na nifanakaiky tokoa aza ny elanelam-bato, nahazo ny maro anisa (51,9%) ireo mpankasitraka (Brexit) ny hialan’i Grande Bretagne (Angletera, Ecosse, Pays de Galle) […]
Droit : nivoaka ny andiany roa
Mpianatra nahazo ny mari-pahazaina Master1 andiany “Andraina” sy Master 2 andiany “Milofo” no navoakan’ny fakiolten’ny Degs, ao amin’ny sampana lalàna, omaly teny amin’ny oniversite Ankatso. Nanomezam-boninahitra ny reny mpiahy azy ireo ihany koa, ny profesora Razakanaivo Rita, mpampinatra efa 43 taona tao amin’ny sampana lalàna, ity lanonana ity.
« Précédent 1 … 895 896 897 898 899 … 1 045 Suivant »